2 na 1 Wall Desktọpụ Mbadamba ụrọ Kitchen Tablet Mount Guzosie Phone njide | Moutik
Ekwentị na-ejide ihe na-adịgide adịgide na FD6
Ọkpụkpọ ekwentị na-ere ire ere na-ekwu okwu FD2
Tengda ahaziri ekwentị Cell Mount GL083
Ududo ududo maka ndina sofa na tebụl na-agbanwe agbanwe ogologo ụkwụ maka mbadamba
2 na 1 Wall Desktọpụ Mbadamba ụrọ Kitchen Tablet Mount Guzosie Phone njide
2-in-1 Kitchen Mount Guzosie
Mee mbadamba nkume gị ka ọ bụrụ ihe ndozi nke kichin ọgbara ọhụrụ gị na 2-in-1 Kitchen Mount Stand.
N'ịbụ nke nwere ntọala 2 dabara adaba-ebe ọ bụla, mbadamba nkume a na-adị mfe ịwụnye na mgbidi ma ọ bụ n'okpuru kabinet, onye na-ejide ihe mbadamba osisi maka kichin, onye na-agụ akwụkwọ ọkụ, onye na-ejide akwụkwọ ọkụ ma ọ bụ kwụ ọtọ na ụkwụ ya na-agbasawanye na tebụl ọ bụla ma ọ bụ na tebụl.
Mbadamba onye na-ejide ihe na-emepụta ihe na-agbanwe ihe nrịgo 360, gbakwunyere ọtụtụ nkwonkwo na nkwonkwo na-agbanwe. Mgbapụta ndenye ngwa ngwa na-enye ohere maka mwepụ mbadamba mbadamba site na njide ihe resizable, na nkwụnye folda compact maka nchekwa dị mfe mgbe anaghị eji ya
Mee mbadamba nkume gị ka ọ bụrụ ihe ndozi nke kichin nke oge a na 2-in-1 Kitchen Mount Stand.
N'ịbụ nke nwere ntọala 2 dabara adaba ebe ọ bụla, mbadamba nkume a na-adị mfe ịwụnye na mgbidi ma ọ bụ n'okpuru kabinet, onye na-ejide ihe mbadamba osisi maka kichin, onye na-agụ akwụkwọ ọkụ, onye na-ejide akwụkwọ ọkụ ma ọ bụ na-eguzo ọtọ na ụkwụ ya na-agbasawanye na tebụl ọ bụla ma ọ bụ n'elu ebe.
Mbadamba onye na-ejide ihe na-emepụta ihe na-agbanwe ihe nrịgo 360, gbakwunyere ọtụtụ pivoting na ntụgharị gburugburu. Ngwa ngwa ntọhapụ na-enye ohere maka mwepụ mbadamba mbadamba site na njide ihe resizable, na nkwụnye mpempe akwụkwọ kọmpat maka nchekwa dị mfe mgbe anaghị eji ya.
Aluminom alloy + ABS
Black ， White
Kwekọrọ n'Ozizi Size
4-10.5 "Ekwentị& Mbadamba
Ihe Get Na-enweta
1. 1x Mgbidi KitchenUgwus Isi
1. 1xMbadamba ụrọ
1. 1 x Oghere
2 x kposara
IHE KWESPRP KWESPR COM KWES .R. - Nakichin mbadamba ugwu dabara maka smartphone na mbadamba site na 4 nke anụ ọhịa na 10.5 sentimita asatọ ekwentị na mbadambana nsonye galaxy s9 gbakwunyere, Galaxy s9, Galaxy S8 gbakwunyere, Galaxy S8, Galaxy S7, Maka Iphone 8 Plus, 7 Plus, 7,6S, X, Moto G6, E4, E4 Plus, Z2 Force, N'ihi naHuawei Mate 10, P20 Lite, P20 Pro, Nwunye 9, N'ihi naIpad 9.7, mini 2, pro 10.5, Maka Samsung Galaxy Tab 7 inch, 8 inch, 9.7 inch.
MGBE INWE - The kichin ekwentịguzorouniquedị ihe pụrụ iche na-anabata usoro ngosi atọ: tebụl, mgbidi na n'okpuru kabinet. Clear tụkọtara na-azọpụta ohere na expandable metal isi ụkwụ. Zuru oke maka ịrụ ọrụ ụlọ akwụkwọ n'ịntanetị ma ọ bụ mkpanaka, mmekọrịta na ngwa, ikiri vidiyo, nyocha weebụ n'ịntanetị& Ọzọ.
A NA-EBE EGO KWURU - Ejiri ọtụtụ nkwonkwo na-agbanwe agbanwe tinyere isi nke ogo 360, nke ambadamba nkumeguzorona-ekpuchi ihu ngosi ọ bụla. Ngwurugwu ahụ dị mma, nke aluminom na-edozi nke ọma na kọmpat, na-eme njem-enyi na enyi, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu mbadamba ụrọ n'ụlọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ!
Ugwu N'ebe ọ bụla - Ejiri ya na cradle arịọnụ na ngwaike niile achọrọ, nke a Mbadamba ụrọ ugwu guzoroenwere ike iwepu ya ma tinyekwa ya dika ichoro, na-eme ka odi mfe ịnweta mgbasa ozi gi mgbe na ebe ichoro ya. Zuru oke maka mgbidi klaasị gị, ọfịs ọfịs, ma ọ bụ n'okpuru tebụl kichin gị!
AHUT-EGO& OZI-OZI - Debe ya n’elu ma hichaa tebụl ahụ, n’elu tebụl, desktọọpụ ma ọ bụ jiri aka ya guzosie ike na-egbochi ntakịrị ụkwụ ya. Na mbadamba countertop ugwu guzoro na-eme ka ngwaọrụ dị elu karịa n'ịhụ na ọ nweghị mmiri mmiri ga-emebi ma ọ bụ merụọ mbadamba nkume mgbe eji ya na kichin ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Kemeghi njide nwere ike jide iPads niile ma ọ bụ ndị ọzọ mbadamba 4 ka 10.5 "Mbadamba na ekwentị
N'ihi na Desktọpụ / Countertop& Wall / Cabinet Mountable Use
The Kitchen Tablet Mount guzo mfe bulie gị ileba anya ka anya larịị, Zuru okè n'ihi na ị na-eme online, na-ekiri TV, mmekọrịta na ngwa, na-ekiri vidiyo, online nchọgharị weebụ mgbe ị na kichin.
Ọ na-eji ihe njigide na-agbanwe agbanwe nke ogo 360, gbakwunye ọtụtụ pivoting na ntụgharị gburugburu. Ngwa ngwa ntọhapụ na-enye ohere maka mwepụ mbadamba mbadamba site na njide ihe resizable, na nkwụnye mpempe akwụkwọ kọmpat maka nchekwa dị mfe mgbe anaghị eji ya.